निर्मला हत्या काण्ड:'डिनए रिर्पोट'सार्वजनिक गर्न किन ढिलाई ? | Ekhabar Nepal
निर्मला हत्या काण्ड:'डिनए रिर्पोट'सार्वजनिक गर्न किन ढिलाई ?
समाज असोज १३ २०७५ ekhabarnepal
काठमाडौं । कञ्चनपुरको भिमदत्त नगरपालिका उल्टाखामकी १३ वर्षीया बालिका निर्मला पन्तको बलात्कारपछि हत्या भएको घटनाको अनुसन्धान गरेका कञ्चनपुरका तत्कालिन प्रहरी प्रमुख डिल्लिराज बिष्टको डिएनए रिर्पोट सार्वजनिक हुन ढिलाइ गरिएको छ ।
बिष्ट लगायत २ जना मेयरका भतिजा आयुष बिष्ट र एसपीका छोरा किरण बिष्टको डिएनए परिक्षण सार्वजनिक गर्न ढिलाई भएको हो ।
स्रोतले दिएको जानकारी अनुसार डिएनए परिक्षणको रिर्पोट जिल्ला प्रहरी कार्यालय कञ्चनपुरमा पुगिसकेको छ । तर, त्यहाँको प्रहरीले रिर्पोट सार्वजनिक गर्न ढिलाई गरेको छ । परिक्षण रिर्पोट सुरक्षितका साथ कञ्चनपुरमा पुगेपनि सार्वजनिक गर्न किन ढिलाई भएको हो भन्ने खुलेको छैन ।
निर्मला हत्या अनुसन्धान फितलो पारेको आरोप लगाइएका तत्कालिन कञ्चनपुर प्रहरी प्रमुख डिल्लिराज बिष्टलगायत ३ जनाको परिक्षण रिर्पोट सुरक्षितका साथ कञ्चनपुुर पु¥याइएको छ । प्रारम्भिक जानकारी अनुसार रिर्पोट सार्वजनिक गर्ने तयारी गरिँदैछ । कञ्चनपुुरका स्थानीय बासिन्दा र प्रदर्शनकारीको माग बमोजिम एसपी बिष्ट र दुई अन्यको डिएनए परिक्षण गरिएको हो ।
अलि जटिल ईस्यू
कञ्चनपुरका प्रहरी प्रमुख प्रहरी उपरीक्षक कुवेरसिंह कडायतले दिएको जानकारी अनुसार शुक्रबारमात्रै रिर्पोट कञ्चनपुर पुगेको जानकारी आएको बताउनुभयो । एसपी कडायतले भन्नुभयो–‘डिएनए परिक्षणको रिर्पोट शिलबन्दी अवस्थामा पुगेको छ, त्यसलाई केन्द्रबाट बोकेर ल्याउनुपर्छ, परिक्षणको नतिजा के छ भन्ने खोलेपछिमात्रै थाहा हुनेछ ।’ एसपी कडायतले का अनुसार ‘त्यसको बारेमा आइतबार मात्रै भन्न सकिन्छ, यो अलि जटिल ईस्यू छ हामिले आएको नतिजालाई मात्रै सार्वजनिक गर्छौ माथि सोधेर कहिले गर्ने भन्ने टुंगो लाग्ने बताए ।
डिएनएको रिपोट सार्वजनिक गरेपछि पनि अनुसन्धान जारी रहने प्रहरी स्रोतले जनाएको छ । कानुन बमोजिम डिएनए परिक्षणका क्रममा देखिएको नतिजा सबैले सहर्ष स्विकार्नुपर्ने हुन्छ । निर्मला हत्या अनुसन्धान शून्यबाट छानबिन गर्न गृहमन्त्रालयले समिति समेत बनाएको छ । समितिले कञ्चनपुर घटनाको अनुसन्धान गर्दै गृहमन्त्री रामबहादुर थापालाई प्रतिवेदन बुझाइसकेको छ ।